युगसम्बाद साप्ताहिक - सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा
Saturday, 05.30.2020, 05:02pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 06.18.2012, 04:51pm (GMT+5.5)
नेपालको राजनीति अथवा राज्य संचालनको परम्परा हेर्दा कुनै पनि परिवर्तन स्वाभाविक ढंगबाट भएको पाइँदैन । जंगबहादुरकै पालादेखि त्यस्तै देखिन्छ । अथवा त्योभन्दा अघि पनि धेरथोर त्यस्तै हुँदैआएको छ । पछिकै कुरा गरौं– २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था अस्वाभाविक ढंगबाटै गयो । पञ्चायत पनि स्वाभाविक ढंगबाट नआएको भए पनि तुलनात्मक रुपमा अलि बढी अडिए पनि जसरी आएको थियो त्यसरी नै गयो । २०६३ मा विघटित संसद्लाई अस्वाभाविक रुपमा ब्यूँताइयो र राजतन्त्र एवं हिन्दुत्वलाई पनि अस्वाभाविक ढंगबाटै पन्छाइयो । इत्यादि सबै कार्य स्वाभाविक र परिपक्व प्रसवलकालको प्रतिक्षा नगरी शल्यक्रियाबाट बलात् बच्चा जन्माए जस्तो भयो । यसरी यहाँ कुनै पनि वयवस्था वा सरकार जसरी अस्वाभाविक तरिकाबाट आएका थिए त्यसरी नै गएका छन् ।
यसबाट हामीले केही सिक्न सकेनौं । हामी अझै पनि मूख्र्याइ र लिडे ढिपीमै छौं जसको ताजा उदाहरण भर्खरै अस्वाभाविक ढंगबाटै समाप्त भएको संविधानसभा नै छ । हिजोसम्म संविधान बनाउँछौं भन्दाभन्दै चार वर्ष व्यर्थै खेर फालिदिए आज आपसमै सत्तोसराप र थुमाजुधाइ गर्दैछन् । सोझासिधा जनता नेताका जुधाइ र दोहोरीमा रल्लिएका छन् । जनताले बुझ्ने भए यस्तो हुन्थ्यो ! नेताहरु अझै पनि आन्दोलनकै भाषा बोल्दैछन् । सबै कुरा सदाकाल आन्दोलनकै बलमा हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर राजनीतिक परिचालनमा स्वाभाविकता ल्याउन नसकेसम्म अब कुनै पनि स्थायित्वको आशा नगरे हुन्छ भनेर नेताहरुले कहिल्यै बुझ्लान् कि नबुझ्लान खै ?
जनता कति सोझा छन् भने नेताले फट्याई बोले पनि पत्याएका छन् । नेताहरु बाहिरियाका इशारामा अझ बलियो आर्थिक टेवा मानिएका आईएनजीओवालाहरुका इशारामा चलेका छन् । पञ्चायत खाएर उग्राएकाहरु समेत गणतन्त्रवादी भएर निस्केका छन् । स्वार्थका आहालमा पौडी खेल्न पल्केकाहरुले अब पाँच सात वटा बलियाहरुलाई राज्य बाँडेर अरुलाई लोप्पा खुवाउने दाउ गर्दागर्दै आफैं घोप्टा खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको पत्तै पाएका छैनन् । नेताहरु बाहिर जति नै प्रगतिवादी देखिन खोजे पनि भित्रभित्र भ्रष्ट प्रवृत्तिले काम गरिरहेको पाइन्छ । झूट बोलेर नै आफ्नो खाइखुराकी चलाएका छन् ।
बलजफत र विध्वंश मच्चाउन सक्नेले जे पनि पाउने र यमानदारले थच्चिनुपर्ने आजको भ्रष्ट सरकारको विशेषता नै भएको छ । आजसम्म मनपरी राज्य कोष उडाएर पनि नपुगेर अब सरकारबाट बाहिरिका विशिष्टहरुलाई आजीवन घरभाडा (घर हुनेलाई पनि), महंगो मोटर, तेल, मर्मत खर्च, सुरक्षाकर्मी र सचिवालय कर्मचारी समेत दिने गरी वर्षेनी पचासौं करोड राष्ट्रको सम्पत्ति खाने यिनीहरुको कुनियत देखेर दुनियाँ आश्चर्यचकित भएका छन् । यिनले राष्ट्रलाई कंगाल पार्नुबाहेक (अपवाद छोडेर) अरु के गरे र त्यस्तो महंगो सम्मान दिनुपर्ने ? जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
आज हाम्रा राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक विधि व्यवहार राखेका छन् कि बलशालीले जे गर्नसक्ने त्यही हुने अराजक शैली छ ? काम गर्ने त नेतृत्वले हो, दलले होइन । दललाई प्रजातान्त्रिक वा अप्रजातान्त्रिक सिद्ध गराउने पनि नेतृत्व क्षमता नै हो । यसरी हेर्दा र यहाँको स्थिति विचार गर्दा राजनीतिक दलविना प्रजातन्त्र सम्भव छैन भन्ने भनाइ पनि अपत्यारिलो भएको अनुभव हुन्छ । आजको अव्यवस्थाले दल मुख्य कुरा नभएर नेतृत्व पो मूलतत्व रहेछ भन्ने देखाएको छैन र ? प्रजातन्त्रका लागि दलको अपरिहार्यता सिद्ध गर्न त दलका नेताको आचरणमा जनताले प्रजातन्त्रको प्रतिबिम्ब देख्न पाउनुपर्छ । तर खोई आज त्यस्तो स्थिति ? आज त एकपटक कल, बल, छल या कृपाबाट माथि पुगेपछि राज्यबाट आजीवन विभिन्न असीमित सुविधा र पेन्सन समेत खान खोज्ने ठगहरुबाट प्रजातन्त्रको सम्बद्र्धन कसरी होला ? बडो सोचनीय स्थिति छ आज ।
पञ्चायतकालमा पेन्सन खान कानुन बनाउने पञ्चभन्दा पनि आजका गणतन्त्रवादी झन गन्हाएको देखेर जनताले “थुइक्क मोरा हो !” भन्दै धिक्कार्न थालेका छन् । यस्तै मनपरीतन्त्र चलाएर जनता रुवाउनकै लागि माओवादीले दश वर्षसम्म विध्वंश मच्चाएको रहेछ कि भन्ने पुष्टि हुँदैन यो विशेष सुविधा बाँडेर खाने प्रसंगबाट ? त्यो बेला पूर्वपञ्चलाई पेन्सन खानबाट सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो तर आज त न्यायाधीशले पनि पाउने गरेकाले राज्यले धान्नै नसक्ने खालको (वर्षेनी सुविधाभोगी बढ्ने हुनाले पनि) यो सुविधा अदालतले के गर्लाकुन्नि ! जनता प्रतिक्षारत छन् ।
नेताले हिजो आज प्रजातन्त्रको नाम लिंदैनन् । त्यो नामबाट ठगी गर्दागर्दा बद्नाम भएकाले नयाँ नामको खोजीमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र भन्न थालेको भनिंदैछ । आखिर जे भने पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने बाहेक केही भएन भन्ने कुरा संविधानका नाममा व्यर्थै चार वर्ष बिताएको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ । त्यसेले उपर्युक्त शब्दहरुलाई नेताहरुले फट्याईकै लागि प्रयोग गर्न थाल्ने हो भन्ने बुझाइ हुन थालेको छ । हिजोका चप्पलछाप नेताहरु आज महलबासी हुनुलाई नै क्रान्ति भएको र परिवर्तन आएको भनेर जनतालाई अझै पनि छकाउने प्रपञ्च भैरहेको अनुभव हुन थालेको छ ।
सरकारका तर्फबाट भैरहेका अनर्थको विरोधमा जनताले आवाज उठाउँदा गल्ती भएकोमा आत्मालोचना गर्छौं भन्दैमा राष्ट्रलाई भएको क्षतिपूर्ति हुन्छ ? नगर्नु भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रलाई नंग्याएर केही नेताले सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने अनि अब दुई तिहाई मत पाएमा जनताका सम्पूर्ण चाहना पूरा गर्छौं भन्नेहरुलाई जनताले कुन रुपमा हेर्ने र कसरी पत्याउने ? जनतामा जान र मूल प्रश्नमा जनमत संग्रह गर्न डराउने अनि हरेक महत्वपूर्ण विषयमा आफूखुसी निर्णय गर्ने सरकारले दुई तिहाई माग्नु लाजमर्दो भएको छ ।
जनताका समस्याप्रति आँखा चिम्लने, जनतालाई नै अविश्वास गर्ने अनि जनतालाई नै ठगेर सुखसयलका आहालमा पौडी खेल्न पल्केका नेताले आफ्नो सम्पन्नता त चुल्याए, तर देश डुबाए । यही हो आजको सार्वजनक पीडा । यस पीडाबाट मुक्ति पाउने उपायको खोजीमा भुट्भुटिएका जनताको चिन्ताले कहिले गुहार पाउने हो कुन्नि !